Tantaran' i Pastora FENOANDRO Josefa Johary, Nikoly Tsihombe | Madagascar features website
Monday, April 2, 2012 - 06:47
TANTARA - JOBILY FANKASITRAHANA
an’i Pastora FENOANDRO Josefa Johary mivady noho ny niasany nandritra ny 31 taona tao amin’ny sahan’ny Tompo (1979-2010)
FLM Antanimora ny 09 – 10 oktobra 2010
Hoy JESOSY : ”IZAHO NO LALANA SY FAHAMARINANA ARY FIAINANA” (Jaona 14:6)
Tamin’ny taona 1935 dia teraka tao an-tsain’ ingahy Tsitahoa (chef de groupement na quartier) ny eritreritra hangataka Sekoly haorina ao Nikoly. Koa dia lasa izy nankany amin’ny chef de poste tany Tsihombe nanao izany fangatahana izany; kanjo tsy nahazo satria efa lany ny budget; koa dia hoy ilay chef de poste: MANDEHANA MANKANY AMIN’ NY MISIONA
Tamin’izay fotoana izay dia i Past Petersen no misionery amerikana tao Tsihombe ; koa dia tonga tao i Tsitahoa ka nanao ny fangatahana.
Nanaiky avy hatrany ny misiona sady faly tokoa, ka dia tsy niandry ela fa nankany an-toerana, ary nanorina trano Fiangonana kosa, sady nametraka Katekista tao Nikoly.
Faly ingahy Tsitahoa - izay tsy mbola nahay nanavaka ny maha samy hafa ny atao hoe Sekoly sy ny hoe Fiangonana - ka dia nanolotra ny tokotaniny nanorenana ny Fiangonana sady nanentana ny olona hiditra ao.
Tsy nanaiky anefa ny vahoaka tao Nikoly raha tsy izy sefo no miditra ao voalohany; koa dia voatery nalefa tao Ramatoa Tsianoha vadin’i Tsitahoa izay mbola tao anatin’ny fanompoan-tsampy tanteraka.
Ny katekista napetraky ny misiona tao dia i Jeremia Lahitsihay, izay sady nampivavaka no nampianatra mamaky teny sy manoratra koa.
Efa mpivady efa elaela ihany i Tsitahoa sy Tsianoha nefa tsy niteraka. Ka ny nahagaga dia ity: rehefa naorina ny fiangonana, ny taona manaraka an’io ihany, dia teraka ny vavimatoany izy tamin’ny taona 1936. Tsy iza izany fa ramatoa Tsiaroka Marie Helène.
Telo taona taorian’io indray dia niteraka ny lahimatoany izy ireo. Tsy iza izany fa i Fenoandro Josefa Johary, izay atao Jobily androany ny niasany 31 taona mipaka, tao amin’ny sahan’ny Tompo.
Teraka tamin’ny 21 Jolay 1939 i Fenoandro ary ny reniny dia natao batisa tamin’ny taona 1940. Ingahy Tsitahoa kosa anefa dia tsy mbola tapa-kevitra ny hatao batisa raha tsy taty amin’ny taona 1943, izy sy Fenoandro zanany.
Tamin’io batisa io, i Fenoandro dia nahazo anarana hoe “Josefa Johary”, ny reniny kosa dia lasa “Marcelline” ary ny rainy indray dia nahazo ny anarana hoe “Simona Petera”.
Ny katekista Jeremia Lahitsihay moa no rain’i Josefa amin’ny batisa.
Rehefa hitan’ny Misionery atao hoe Everberg fa zaza nanan-tsaina i Josefa dia nangatahiny mba ho entiny hianatra any Etazonia. Kanjo tsy nanaiky an’izany hevitra izany ny rainy; ka dia ny katekista Jeremia ihany no nikarakara ny fianaran’i Josefa tao amin’ny Sekoly fototra (privée) tao Tsihombe.
Voatery nakantona anefa io sekoly io noho ny hotakotaka tamin’ny 1947; ka dia nifindra ho any Imongy i Jeremia.
Lasa niaraka taminy tany koa i Josefa noho ny fitiavany fianarana. Taty aoriana anefa dia rava indray koa io sekoly io noho ny tondra-drano tamin’ny taona 1951 izay naharava ny tanànan’ Imongy manontolo afatsy ny trano Fiangonana ihany.
Tsy mbola kivy i Josefa na dia izany aza ka dia lasa nianatra tany Marovato indray ka nipetraka tao amin’ny katekista Vanga Daniel.
Kanjo tsy ela taorian’io dia voatery nody ho any an-tanàna Nikoly izy; satria ingahy Tsitahoa rainy dia lasa nandeha nikarama tany Nosy Be.
Onena azy indray i Jeremia, rainy amin’ny batisa, ka nitondra azy hianatra tao amin’ny sekoly 12 lahy, na dia mbola vao 14 taona monja aza izy (1953).
Rehefa avy eo izy dia nanohy ny fianarany hatrany amin’ny Sekoly Biblika tany Ambovombe, tamin’ny taona 1955, ary nivoaka ho Katekista tamin’ny taona 1958 .
Teo izy dia lasa Katekista ka voatendry hampianatra tamin’ny ”garderie d’enfants” tany Belitsaka, any Marovato.
Tsy naharitra ela anefa io asa io satria latsaka tanatin’ ny fakam-panahy lalina ingahy Katekista Josefa; ka lasa nampitaha ny karaman’ny mpiasam-piangonana amin’ny an’ny mpiasam-panjakana.
Koa dia niala izy, ary nanao “secrétaire” ny Chef de Canton tao Tsihombe nanomboka tamin’ny 1960 ka hatramin’ny taona 1962; rehefa avy eo dia naka fanadinana tamin’ny zandarimaria ary dia afaka soa aman-tsara ka nanao” stage tany Moramanga tamin’ny taona 1963.
Rehefa nivoaka ho Zandary izy dia voatendry hiasa tany Miandrivazo, avy eo dia nifindra tany Berevo (Belo/Tsiribihina). Ary dia niofana momba ny “Radio” ka rehefa nahazo ny mari-pahaizana momba izany dia voatendry hiasa tany Amboasary atsimo.
Tamin’ny naha Zandary azy dia niezaka izy mba hijoro amin’ny “FAHAMARINANA”; koa dia nenjehin’ireo Zandary namany izy noho izany; ary dia voatery nandao io asa io ka niverina ho ao Nikoly indray tamin’ny taona 1969.
Roa taona taorian’io izy dia nisora-panambadiana ary dia nanao mariazy tamin’ny 11 septambra 1971 tao amin’ny FLM Tsihombe.
Rehefa avy eo izy dia lasa nankany Morombe ka niasa tamin’ny société atao hoe “Samangoky”. Nandroso tokoa ny fivelomany tamin’ io asa io satria dia “Encadreur de l’Agriculture” no toerana nomena azy, satria izy dia olona mahatoky; ary dia naharitra fito taona tao izy.
Tao no nividianany ilay fiarakodia 3CV vaovao, izay mbola vitsy mpanana tamin’izany fotoana izany. Lazaina eto moa izany rehetra izany mba ho fisaorana an’ Andriamanitra Mpanome.
Kanjo dia voatery nilaozany io asa io satria nodimandry ingahy Tsitahoa Simona Petera rainy, tamin’ny taona 1978.
Rehefa nidonan-javatra mafy toy izany izy dia nanomboka nieritreritra ny fiantsoan’ Andriamanitra azy hiverina amin’ ny asam-piangonana indray.
Nisy ihany koa moa ireo Pastora maromaro izay nitaona azy mba hiroso amin’ny asa Pastoraly rahateo.
Anisan’ izany Pastora Diseutier Eliasy izay lasa Filohan’ny S.P.F.T taty afara, sy Pastora Rempolia Soandro Manoasy, Filohan’ny SPTo teo aloha, izay nitaona azy hianatra ho Pastora satria mbola vitsy ny Pastora ao amin’ny Synodam-Paritany.
Fa rehefa tonga tany Tsihombe ry Pastora isany: Zakaria Tsivoery sy Marijaona Tsifolahy avy any Tolagnaro, tonga namonjy ny isan-kerintaonan’ ny Toby, dia nilaza izy fa manana faniriana hianatra ho mpiandry. Dia namaly ireo ray aman-dreny ireo fa tsy mila miomana intsony ny olona efa nahavita Sekoly Biblika. Koa dia avy hatrany dia natokana ho mpiandry izy tamin’ny 16 septambra 1979 tao amin’ny Toby Siloama.
Nanomboka teo izy dia nanao ny asan’ny Tompo tamin-kafanam-po tokoa, ka sady nanao ny asan’ny mpiandry no nanao Evanjelista ihany koa.
Isan’ ny asa lehibe vitany tamin’ izany ny ezaka famelomana indray ny Sekoly 12 lahy, izay efa rava ela (tany amin’ny taona 1958 tany ho any). Ka vokatr’ io faharavana io dia maro ny fiangonana tsy nanana katekista intsony ary tsy vitsy ihany koa ny efa nikantona mihitsy aza noho ny tsi-fisian’ny mpitarika.
Nambarany tamin’ izany fotoana izany fa malahelo mafy izy noho ny faharavan’ io Sekoly izay nanana ny naha-izy azy io.
Koa dia tsy nisalasala izy nanatona ny Misionery Leo Lellelid ary nanao soso-kevitra ny mba hananganana Sekolin’ ny Loholona hanofanana izay rehetra mazoto.
Nanaiky avy hatrany i Pastora Lellelid koa dia lasa mpiara-miasa akaiky tokoa izy mianaka nanomboka teo; ary i Josefa dia noraisina ho mpiasam-piangonana sady nampidirina CNaPS tamin’io taona 1979 io ihany.
Natomboka àry ny asa koa dia nantsoina ny tanora, tsy nanavahana na lahy na vavy, izay rehetra te- hianatra Soratra Masina, mba hofanina ho mpitarika fiangonana ho solon’ny katekista.
Rehefa avy eo dia nozaraina ny andraikitra ka Pastora Lellelid nampianatra Soratra Masina; Pastora Solo Jean Mananga, izay Tonian’ny T.M.M. SPFa ankehitriny, nampianatra Toriteny; Katekista Refamera Gabriel nampianatra mamaky teny sy manoratra; Katekista Marka Mahasolo nampianatra ny fotopianarana; katekista Damy Zakaria indray dia nampianatra kajy; ary ny Evanjelista Josefa Johary no nampianatra solfa sy hira.
Nantsoina matetika ihany koa i Pastora Manjomana Sylvain izay talen’ny Kolejy Loterana tao Ambovombe tamin’izany fotoana izany mba hizara ny traikefa nananany; ary ny mpitondra Fileovana Pastora Seta Maharombaka dia nandray anjara tao ihany koa.
Fahombiazana lehibe no hita tamin’io programa io satria dia marobe tokoa no tonga nanoina ny antso. Ao ny avy amin’ny Fitadremana: Imongy, Antaritarika, Marovato, Faux-cap (Betanty), Anjampaly, Maroakalo ary Tsihombe.
Ankoatry ny fanofanana izay natao mandritra ny herinandro iray isam-bolana dia nisy ihany koa ny tafika masina lehibe natao indray mandeha isan-telovolana.
Ny vokatra azo tamin’ izany dia ny fiorenan’ny Fiangonana vaovao toy ny ao Betela sy Marobe (Imongy), Ampihamy (Antaritarika), Ampengoky, Ambarobe, Ambolonagnondry, Ambotry, Ambaromidada, Akibay (Betanty), Anjantsampa, Sahanony (Tsihombe) sy ny sisa tsy voatanisa.
Tao koa ireo Fiangonana efa nikantona noho ny tsi-fisian’ny mpitarika no novohaina indray satria ireo tanora vita fiofanana ireo dia nanao ny asan’ ny Katekista avy hatrany, tsy nila nandalo Sekoly Biblika.
Tsara ho marihina fa nisy tamin’ ireo tanora mpiofana ireo no nangataka ka natokana ho mpiandry; ary tao koa ireo izay nahazo anjara tokantrano tamin’ izy samy mpiofana tao ihany. Iza tokoa moa no tokony hifampitsinjo afatsy ny samy zanak’ Andriamanitra ihany !
Rehefa hita toy izany ny hafanam-pon’ ity Evanjelista ity tamin’ny asam-piangonana, dia maro no namporisika azy hiroso lalindalina kokoa amin’ ny amin’ ny fianarana teolojia.
Nisalasala be ihany anefa izy noho ny antony maro samihafa; nefa nanaiky ihany tamin’ ny farany satria ny Pastora dia afaka manao batisa sy mizara ny tena aman-dran’i Jesosy ihany koa.
Koa dia nirotsaka tao amin’ny Sekoly fiomanana ho Pastora izy tamin’ ny taona 1983 na dia efa nahazohazo taona ihany aza, sady efa maro anaka rahateo koa.
Marihina fa tahaka izay nanjo ny Sekoly 12 lahy ihany koa, ny Sekoly Biblika tao Mahavelo Ambovombe dia efa foana efa ela be. Noho izany dia nampiasaina ny trano tao ho sekoly hiomanan’ izay te-hianatra any amin’ny Seminery Teolojika ( S.T.P.L ) any Bezaha izay Seminery iraisana amin’ ny S.P.F.T sy ny S.P.B.A.
Koa dia niditra tao izy; sady niomana no naka BEPC ihany koa; koa dia samy azony avokoa izy roa ireo tamin’ny taona 1984.
Rehefa avy eo dia nianatra telo taona tany amin’ny STPL ka nahazo ny diplome pastoral tamin’ny taona 1987; ary mbola nanohy telo taona indray tany amin’ny STL tany Ivory avaratra Fianarantsoa ka nahazo ny Baccalauréat en Théologie tamin’ny taona 1990.
Nahagaga ry havana ny fitiavan’ ity mpanompon’ Andriamanitra ity fianarana izay zary lesona ampitaina ho an’ny taranaka aty aoriana.
Tsiahivina eto fa tsy dia nandeha ho azy tsy akory izany rehetra izany fa tao dia tao tokoa ny fitsapana mahamay izay niainan’ izy mianakavy :
Tamin’ny taona 1986 ohatra, raha nanao stazy pastoraly tany Faux-Cap izy, fony mbola mpianatra S.T.P.L, dia nandalo fitsapana be, satria nisy mosary mafy tamin’ ny faritra Androy tamin’ io taona io. Tsy naharaka ilay “bourse” kely hiantohana ireo zaza 10 mianadahy ( 5 lahy, 5 vavy ).
Matetika rehefa tsy nisy hatokona dia nandrahoina ny “daoa” : tsy sakafo io, fa vahan-kazo (racine) izay ampandevezina, ka ny rano nandrahoana azy no manome hery kely ho an’ny mpihinana. Teo dia tsapa tokoa fa “tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny teny rehetra aloaky ny vavan’ Andriamanitra”.
Taty afara dia nisy mpanompon’ Andriamanitra anakiray izay nanampy azy ireo indrindra fa tamin’ny fianarana tany Ivory; tsy iza izany fa Pastora Arthur Shultz mivady.
Izany fihafiana be izany moa dia namporisika ireo zaza ireo hifantoka amin’ ny fivavahana; ary ny anankiray aza dia nanaraka ny dian-drainy ka nianatra ho Pastora taty afara ary ankehitriny izy dia miasa ao Tranomaro. Tsy iza izany fa Pastora Lahinirina Joseph. Ny anankiray koa, vehivavy, dia lasa Ramatoan’ i Pastora Mbehoafaka Petera Félix izay mpitondra Fileovana ao Tsivory ankehitriny.
Hafoheziko ny tantara …
Rehefa azo soa amantsara ny Baccalaureat amin’ny Teolojia dia tonga teto Antanimora avy hatrany i Pastora Josefa mianakavy, noho ny fanendren’ny S.P.To azy ho mpitondra ny Fileovana Antanimora.
Izy irery no nisahana an’ Antanimora sy Jafaro ary Andalantanosy. Tsy nisy na mpiandry na katekista na dia iray aza tamin’ izany fotoana izany eran’ ny Fileovana.
Olana lehibe tsy maintsy novahainy voalohany io fidadasiky ny faritra iasana io ka ny tetika nampiasainy tamin’ izany dia ny “fifohazam-panahy”.
Tsara ho marihina fa nisy Pastora hafa ihany teto dia Pastora Larsen, Misionery Norveziana, saingy izy dia tsy nitandrina Fiangonana, fa nanao Tafika Masina ihany, manerana ny Synoda iray manontolo. Koa noho izany ny famangiana fiangonana, ny toriteny, ny fiomanana, ny fampianarana Soratra Masina, ny fampianarana ny Konfirmanda sy ny Katekomena ary ny asa sy fampaherezana –manerana ny Fitandremana telo - ireo rehetra ireo dia niandry an’ i Pastora Josefa avokoa.
Rehefa natomboka ny asam-pifohazana dia demoniaka maro no sitrana. Ireo olona sitrana ireo dia lasa kristiana, ary nisy amin’ izy ireny no nanolo-tena ho mpiandry ka dia nahazo namana mpiara-miasa ingahy Pastora. Araka ny efa iaraha-mahalala ihany, dia tsy mikarama akory ireny mpiandry ireny, nefa dia tena manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa amin’ ny asam-piangonana.
Izay ilay tetika nahomby teto Antanimora ry havana, ka zaraiko aminareo. Niaiky hatramin’ ny Misionery Norveziana.
Nahagaga an’ i Pastora Larsen ny fihetsehan’ny marary. Resy lahatra moa izy ka dia lasa mpandoro ody koa amin’ ny fotoana maha eo an-toerana azy. Mahery JESOSY, hoy izy, raha nahita ny asa lehibe natao.
Ankehitriny dia efa lasa lavitra ny Fileovana Antanimora raha ny hamaroan’ny mpiandry no jerena.
Tamin’ izany fotoana izany dia noeritreretina ihany koa ny hiantsoana Pastora ho an’ny fitandremana Andalantanosy. Namporisihin’ i Pastora Josefa ny fiangonana tao an-toerana mba hilatsaka ao amin’ny lisitry ny mahazo miantso Pastora. Izany no nahazoany an’ i Pastora Miliasy.
Koa dia ny fitandreman’ Antanimora sy Jafaro no sisa. Nitombo isa ihany anefa ny fiangonana noho ny asa Tafika Masina lehibe izay natao nanomboka hatrany Ampamata ka nipaka hatrany Mikoboka. Anisan’ ny vokatra tamin’ izany ny fiangonana Nandrosoana sy Magnajahaolo. Nisy koa Tafika Masina izay niarahana tamin’ny TMM/SPAA izay nanorenana fiangonana tao Ambondrombe sy ao Lambokaboka.
Anisan’ ny zava-bita teto Antanimora ihany koa ny fiverenan’ io tokotanin’ny FLM Antanimora eo atsinanan’ny trano Fiangonana io, izay efa vitan’ olona hafa “reconnaissance” nefa dia tanim-piangonana tsotra izao.
In-32 niverenana tany amin’ ny Tribonaly tany Faradofay io raharaha io, izay vao tafaverina tamin’ny fiangonana ilay tokotany. Na dia sarotra sy mafy aza izany tolona izany dia notontosainy mba hanome lesona ny amin’ny tokony hikarakarana ny fananam-piangonana.
Ao koa ny resaka Dispensaire. Tolona lavitrezaka no nahazoantsika io Dispensaire SALFA mijoro eo io.
Noho ny fitsinjovana ny maha-olona feno, fa tsy ny ara-panahy ihany, dia nanao taratasy fangatahana Dispensaire tany amin’ny KMSL i Pastora Josefa sy ny Komitim-piangonana teto.
Nivaly ilay fangatahana ka nekena. Kanjo rehefa avy eo dia notadiavin’ ny sasany haorina any an-toeran-kafa ilay Dispensaire, nefa dia niaraha-nahita izao fa Antanimora no nanao ilay fangatahana.
Dia nifandroritana teo nandritra ny K.S.P.A.A in-3 farafahakeliny. Farany dia nanatona avy hatrany an’ i Dr Quanbeck i Pastora Josefa, ka nanolotra ny trano stasiona mba hanaovana an’ ilay Dispensaire. Tsy nisalasala koa ity farany fa avy hatrany dia nametraka ny fitaovana rehetra mbamin’ny mpitsabo; ka dia io izy io ahazoan’ny taranaka aty afara rehetra tombontsoa ary anaingana anareo ihany koa mba hikolokolo io fanomezan’ Andriamanitra io.
Farany, amin’ ireo asa lehibe izay hotsahiviko eto mba hisaorantsika an’ Andriamanitra amin’ izao Jobily izao, dia ny famerenana indray ny Sekoly Biblika izay efa nikantona ela.
Tamin’ ity indray, dia nandefa soso-kevitra in-droa miantoana tany amin’ny SPAA i Pastora Josefa, ny amin’ izay paik’ ady tsotra sy azo tanterahina haingana, mba hahazoana mamoha indray ny Sekoly, tsy mila vola be.
Ny soso-kevitra naroso voalohany dia tsy naharesy lahatra ny KSPAA. Fa ny faharoa dia ity : “Aoka hovohàna indray ny Sekoly Biblika ao Mahavelo Ambovombe mba hianaran’ izay afaka mianto-tena na hiantohan’ ny Fitandremana nihaviany; ka ny mpampianatra amin’ izany dia ireo Pastora maro ao an-toerana ihany”.
Koa dia isaorana an’ Andriamanitra manokana eto ry havana ary isaorana ny S.P.A.A ihany koa, izay ampitaina aminao Pastora Mampitohy Elia, Filohan’ ny Synoda, fa dia lany soa amantsara io soso-kevitra io; ary rehefa nampiharina dia io iaraha-mahita io ny vokatra azo; fa katekista sy evanjelista maro no efa nivoaka tao Mahavelo ary miasa manerana ny Synodam-paritany izy ireny, mikarakara ny ondrin’ Andriamanitra.
Marihina fa raha mbola niasa teto Antanimora i Pastora Josefa dia nafindran’ ny Synoda ho any Betanty. Nalahelo mafy ny Fiangonana teto tamin’ izay, ka dia nanao fangatahana tany amin’ny Synoda ny mba hamerenana azy eto indray, ary dia tafaverina soa aman-tsara. Ary niasa teto izy mandra-pahatongan’ ny fotoana nisotroany ronono, tamin’ ny taona 1999.
Nefa na dia efa nisotro ronono aza izy dia mbola nanohy ny asa maha Tonian’ ny FiFiL eran’ ny Synoda azy, izay niantsorohany nandritra ny 17 taona.
Satria manko, fony mbola nitambatra ny Synoda roa tao anatin’ny S.P.To dia efa voafidy i Pastora Josefa ho Tonian’ny FiFiL/SPTo tamin’ ny taona 1993. Telo taona taty afara, rehefa lasa Synoda mitokana i SPAA, dia mbola izy ihany no natao Tonian’ny Fi.Fi.L/SPAA ary tsy niato izany raha tsy vao tamin’ny volana Avrily 2010 lasa teo.
Singanina manokana eto fa tamin’ny taona 2005, tamin’ny Zaikakely FiFiL natao tany Tsivory, dia efa nangataka tsy hofidina intsony izy; satria aoka mba homena ny hafa koa ilay toerana, indrindra fa ny tanora.
Tsy nanaiky an’ izany anefa ny K.S.P.A.A fa mbola nanolotra azy ihany hofidina; ary dia lany indray izy ho eo amin’ ny toeran’ ny Tonia FiFiL. Tamin’ny taona 2009 anefa dia nanao taratasy mihitsy izy, nanehoany fisaorana ny S.P.A.A ary nangatahany tsy hofidina intsony, fa efa 70 taona.
Noho izany no nahatonga ny SPAA hisaotra an’ Andriamanitra sy hitsodrano an’ i Pastora Fenoandro Josefa Johary amin’ny alalan’izao Jobily izao. Koa satria Antanimora no Fileovana niasany farany dia izany no anton’ ny anaovana ny Jobily eto Antanimora amin’ izao faha-09 sy faha-10 n’ny volana oktobra 2010 izao.
Izay sy izay ry havana ny tantaran’ ity raiamandreny be, izay tia fianarana, mafana fo, nefa malemy fanahy izay atao Jobily androany ity.
Ny Foiben’ ny Fiangonana Loterana Malagasy moa dia efa nanome azy mari-pankasitrahana izay natolotra tamin’ ny faha- 140 taonan’ ny FLM tany Betafo Antsirabe tamin’ ny taona 2007.
Ny fitondram-panjakana ihany koa dia efa nanome azy ny mari-boninahitra “Chevalier de l’Ordre National".
Izany rehetra izany dia ataontsika ho voninahitr’ Andriamanitra irery ihany, ny amin’ ny asa vita sy ny faharetan’ny mpanompony na dia izao efa 71 taona izao aza, izay mbola andinihany fanimpitony ny Baiboly manontolo (manomboka amin’ ny Genesisy ka hatramin’ ny Apokalipsy).
Ho an’izay te-hahalala bebe kokoa dia misy boky nosoratan’ i Pastora Josefa mitondra ny lohateny hoe « izay atao hoe “Fiainana” araka an’ i Jaona” izay tsara hovakina koa; azo jerena eny amin’ ny Tranomboky.
Ao ihany koa ny site internet izay misy ny tantaran’ i Pastora sy toriteny ary fampianarana Soratra Masina, azo jerena amin’ izao adiresy izao : www.gascar.me/pastora-josefa